Kusoo dhawoow Lacag Dadku Asal u yihiin
Paxful waxay badalaysaa aduuntada dhaqaalaha. Keliya muddo shan sano ah, waxaan noqonay mid kamid ah suuqyada ugu waawayn ee Bitcoin ee dadka caadiga ah wax ku kala iibsadaan ayna adeegsadaan malaayiin aduunka ku kala dhaqan. Shaqadeenuna waaba biloow.
Paxful waxaa lagu aasaasay higsi fudud: in la xoojiyo afar milyan oo qof oo la iska ilaaway kuwaas oon helin baanki ama baanki ku filan, si ay u maamulaan lacagtooda qaab aysan waligood u maamulin.
Soo galooti ka yimid Masar ayaa ka dhashay bartamaha New York, Ray wuxuu markasta jeclaa inuu caawiyo dadka kale. Wuxuu ku riyoonaayay aduunyo dhaqaalaha uu heli karo qof kasta fikirkaas ayaana keenay shirkada Paxful.
Asagoo ku koray Estonia, Artur ayaa bartay sida tignooloojiyadu u badeli karto aduunyada. Asagoo doonaaya inuu abuuro farqi, wuxuu u guuray New York si uu uga miro dhaliyo riyadiisa abuurista xoriyad dhaqaale oo uu helo qof kasta oo aduunka ku nool.
Waxaan ku nool nahay kuna shaqaynaa sadex mabda'da oo fudud si ay noogu hagaan xirfadeena nololeed.
Haddii aan nahay Paxful, waxaan adeegsanaa dadaalada aadanaha awooda badan si aan u samayno shaqada. Waxaan shaqaynaa saacad kasta si aan u siino isticmaalayaasheena waxa ay ku riyoonayeen. Waxaan ka dhigaynaa wixii aan horay u suurtageli jirin xaqiiqo suuragashay si aan u badalno nolosha balaayiin qof oo caalamka ku kala dhaqan.
Dadka ayaa Loo dhisay
Markaan go'aanno gaarayno Paxful, waxaan niyada ku qabanaa dadka—kama fakarno faa'iidooyin. Waxaan tagaynaa meelaha aduunyada kale iska indho tirtay ayna iloowday. Waxaan ka caawinaynaa qoysaska inay kobcaan, waxaan dhisaynaa dugsiyo, waxaana u sahlaynaa isticmaalayaasheena inay noqdaan mulkiilahooda shaqsiga ah.
Ku xirnoow Wadooyinka
Waxaan dhagaysanaa bulshadeena 24/7 markaan joogno Paxful. Kuma jirno dabaqyo dhaadheer mana xirnin "suudad"—Waxaan wadooyinka la joognaa dadka. Waxaan markasta la hadlaynaa isticmaalayaasheena, anagoo ka codsanayna fikradahooda, abuurayna shaqo tan kasii wacan.
Paxful waxay badalaysaa qaabka aduunku lacagta u diro waxayna hormarinaysaa lacagaha oonleenka ah - ayadoo u sahlaysa lacag dirista qof kasta, meel kasta, iyo xili kasta.
Ma haysatid miyaa koontada baanka? Dhib malahan. Waxaan haysanaa in ka badan 300 oo qaababka lacag bixinta ah oo aad mid ka dooran karto, taasoo kuu sahlaysa inaad lacagta ku dirto qaabkaad rabto.
Tignooloojiyada Dadku Xoojinayaan
Paxful gabi ahaanba waa hanaanka u dhexeeya isticmaalayaasha, taasoo ka dhigan in isticmaalayaasheenu ay la ganacsadaan dad run ah—oo ah sababta Bitcoin loo aasaasay in loo isticmaalo.
Kaydka Lacagta oonleenka oo Bilaash ah
Waa mid la isku halayn karo, ay fududahay in la isticmaalo, wax lacag ahna kaa goosan maayo. Kaydkeena oonleenka ah wuxuu siinayaa qof kasta meel amaan ah oo ku kaydsado hantidiisa — ayadoon laga eegayn cidda aad tahay ama meesha aad kasoo jeedo.
Badqabka iyo amaanka ayaa ah qaybaha ugu muhiimsan marka laga hadlaayo lacagtaada. Dhammaan lacagaha ku jira Paxful waa kuwa difaac ka helaaya dalaalkeena amaanka ah si loo sugo kalsoonidooda.
Gudaha barta Paxful, waxaan aaminsan nahay Bitcoin inay tahay mustaqbalka iyo gaariga isbadelka. Nidaamkeena ayaa lagu dhisay Bitcoin si loo bixiyo fursado, loo hormariyo nolosha, loogana dhigo aduunka meel u wanaagsan bulshooyinka ugu baahida badan, ayadoo la adeegsanaayo Bitcoin.
Yoolku waa maxay? Waa in la dhiso 100 dugsi, xarumaha biyaha, iyo hal abuurayaal ganacsi oo gabi ahaanba ay maalgelinayso Bitcoin. Waxaan hadda dhisaynaa dugsigeenii afraad waxaana noo haray 96 dugsi inaan dhisno!
Built with Bitcoin ayaa sidoo kale gacan ka gaysatay gurmadka COVID-19 ee Afrika—anagoo tabarucaado deeqeed ka helnay macaamiisheena iyo saaxiibada waxaan awoodnay inaan siino cunto, jeermis dilayaasha gacmaha, iyo qalab kale oo difaac ah dadka u baahan.
Nagusoo biir! Aan aduunyada isbadel wadajir ah ka abuurno.
Xog dheeraad ah Baro
Xafiisyada daafaha caalamka
Shaqaale doonaaya inay aduunyada ka dhigaan meel sidaan ka fiican
Luuqadaha looga hadlo xafiisyadeena caalamka
Hiigsi ah in la dhiso aduunyo ay dadka dhan dhaqaalaha ku heli karaan si siman
Haddii aad qabto cilad dhanka taageerada ama doonayso inaad fikir ka dhiibato sida aan u hormarin karno badeecooyinkeena, waxaan doonaynaa inaan xog dheeraad ah uga ogaano arrinta
. Hase yeeshee, haddii aad doonayso inaad la xariirto Paxful si aad wax uga waydiiso su'aalo kale oo ganacsiga la xariira, waxaad naga heli kartaa knaallada kale.
Saxaafada iyo Suuqgaynta
Naga caawi faafaahinta xogta Paxful adoo gaarsiinaaya saxaafada iyo mashruucyada suuqgaynta. Nalasoo xariir si aan uga jawaabno su'aalaha saxaafada adoo nagalasoo xariiraaya [email protected].‎
Barnaamijka Bug Bounty ayaa ku siinaaya fursad aad ku helayso abaalmarin aqoonsiga ciladaha farsamada. Kusoo gudbi [email protected]. Xog dheeraad ah ayaa ka helaysaa halkaan.‎
Soo sheeg cilad
Si aad u diiwaan geliso ciwanka shirkad si ganacsigu loogu sameeyo Paxful, waxaad iimeel u diri kartaa [email protected]. Xog dheeraad ah waxaad ka helaysaa halkaan.‎
Iibabka iyo Iskaashiyada
Si aad su'aal uga keento noqoshada iskaashade. Noo sheeg haddii aad doonayso inaan kula shaqayno adoo iimeel u diraaya [email protected].‎
La xariir qaybta Iibka
Aan dhisno Mustaqbalka si wadajir ah
Kusoo biir Dhaqdhaqaaqeena
Abuur koontadaada Paxful oo hormarka gaarsii aduunyada lacagta oonleenka ah.
Shaqooyinka laga qabto Paxful Furo Ciwaan